စပျစ်သီးပြွတ်အမျိုးသားများအတွက်ရပ်ဂ်ဘီရှပ်အင်္ကျီ၊ ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » သင့်ရဲ့ဗီရိုထဲမှာ timeless ရှပ်အင်္ကျီစပျစ်သီးကိုရပ်ဂ်ဘီသည်လူ
လူတို့သညျစပျစ်သီးကိုများအတွက်တီရှပ် လြှော့ပေါ့ဘယ်တော့မှမယ့်ဂန္တဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏စံဖြတ်ကအားလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများကို fit မှခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါရှပ်အင်္ကျီအရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်: S, M, L, XL, XXL, ပင် 3XL 4XL! ရှပ်အင်္ကျီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စတိုးဆိုင်၏ဤမော်ဒယ်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းတကျိပ်နှစ်ပါးသောအရောင်များထက်အားလုံးအတွက်, အဘယ်သူမျှမနည်းပါးလာ။ အဆိုပါအရောင်များဖြစ်ကြသည်: အဖြူအနက်ရောင်, အနီ, ရေတပ်, အစိမ်းအပြာ, ဖိုက်မီးခိုးရောင်, တော်ဝင်ပြာ, Heather မီးခိုးရောင်, အဝါရောင်, khaki အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင် diva ။
"Black ကသောကြာနေ့: - ဟာ Off အားလုံး 15%!
ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ *: - အားလုံးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ရေကြောင်းအပေါ် 15%! "